सहर उज्यालो अभियानमा जुटे स्थानीय (२०७३ फाल्गुन ११, बुधवार)
चितवन / भरतपुरका उपभोक्ता सहर उज्यालो पार्ने अभियानमा जुटेका छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम अन्तरगत सहर उज्यालो पार्ने अभियानमा स्थानीय उपभोक्ता सक्रीय भएका हुन् । यो वर्ष साढे ४ सय सौर्य सडक बत्तीको माग भएकामा मन्त्रालयबाट रू. ४९ लाख मात्र बजेट स्वीकृत भएकाले प्राथमिकताको आधारमा विभिन्न टोलले काम समेत शुरू गरेको भरतपुर उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर विराट घिमिरेले बताए । सो बत्तीका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो वर्ष स्याउलीबजारका लागि मात्रै रू. १८ लाख ५५ हजार अनुदान दिएको र भरतपुर उपमहानगरले रू. दुई लाख ७९ हजार व्यहोरेको छ भने रू. सात लाख २० हजार स्थानीय बासिन्दाले व्यहोरोका छन् ।
ससांसद कृष्णभक्त पोखरेलको सांसद विकास कोषबाट समेत रू. दुई लाख प्राप्त भएको स्याउलीबजार टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष तुलसा ज्ञवालीले बताईन् । उनका अनुसार सडकको अध्याँरो क्षेत्रमा यो वर्ष २७ ओटा सौर्य सडकबत्ती निर्माण लागि रू. २८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । गएको वर्ष स्याउलीबजार र हाकिमचोकको राजमार्ग क्षेत्रमा ४७ ओटा सौर्य सडक बत्ती बालिएको थियो । अझै एकसय जती बत्ती भयो भने स्याउलीबजार आसपासका क्षेत्रमा राती बिजुली बत्तीको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, �आगामी वर्ष पनि यो अभियान जारी हुन्छ । यसरी सोलार बत्ती राख्दा हिड्नलाई पनि सजिलो र दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्छ ।� रासस